देश विकासको लागि ‘आध्यात्मिक मोडल’ रोज्ने कि ? |
देश विकासको लागि ‘आध्यात्मिक मोडल’ रोज्ने कि ?
ज्योतिष दिवाकर पन्त १२ असार २०७५, मंगलवार १२ असार २०७५, मंगलवार
विश्वका हरेक विकसित देशले विकासका लागि फड्को मार्दा टेकेका निश्चित आधार छन् । विश्वमा आर्थिक महाशक्तिका रुपमा अघि बढिरहेको चीनले पनि आर्थिक विकासका लागि चरणबद्धरुपमा आफनो रणनीति अपनाउँदै आएको छ । कुनै बेला मास प्रडक्सनको नीति अँगालेर संसारभर सस्तो सामान आपूर्ति गर्ने रणनीति लिएको चीन यतिबेला गुणस्तरीय सामानको उत्पादनको रणनीतिमा छ । दोस्रो विश्वयुद्धको हारपछि केवल आर्थिक विकासको लक्ष्यमा मात्र अघि बढेको जापानले विद्युतीय सामानसहित सवारीसाधन र प्राविधिक सामानहरुको उत्पादनमा केन्द्रीत रहेर जापानले आर्थिक सम्बृद्धि हासिल गरेको हो ।
मलेसियामा महाथिर मोहम्मदको नेतृत्वमा आन्तरिक पूँजीका आधारमा आफना प्राथमिकतालाई मुख्य आधार मानेर विकासको आधारस्तम्भ कोरिएको पाइन्छ । आफना सर्त पालना गरे मात्र ऋण दिने अन्यथा नदिने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतको सर्त अस्वीकार गरि मलेसियाले आफनै पूँजीको जगमा विकासका पाइला कोरेको पाईन्छ ।
कुनै भौगोलिक र प्राकृतिक वरदान नपाएको दुर्भाग्यशाली देश सिंगापुरमा लि क्यान युको नेतृत्वमा माटो सुहाउँदो विकासको मोडलले सिंगापुर आज अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली नेताबीचको वार्ता हुने विश्वासिलो स्थलका रुपमा परिणत हुन सफल भएको छ ।
हो, उसो भए नेपाल विकासका आधार के हुन ? हामी यसबारे घोत्लिएका छौ ? वा विश्वका कुनै प्रख्यात विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा दीक्षित अर्थशास्त्रीले कोरेको कुनै पदचाप छ ? नेपालको माटो सुहाउँदो, यथार्थमा टेकेको, व्यवहारिक धरातलको विकासका आधार के के हुन ? चीनको मास प्रडक्सनको सामु हामी सामान उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्छौ ? भारतको वर्षाै देखिको औद्योगिक अनुभव त चीनका सामु प्रतिस्पर्धा गर्न उसलाई कठिन परिरहेको छ ।
देशको इतिहासमा जनताको मतबाट बलियो सरकार बनेको यो समय हो । यसबेलाको सरकारले चाहेमा देशको लाथलिङ्ग अवस्थालाई यु–टर्न दिएर विकासको मार्गमा डोर्याउन सक्छ । तर, यसबारे व्यवहारिक चिन्तन भएका छन् ? अँग्रेजीमा एउटा भनाई छ– डु द डुएबल फष्ट, अर्थात गर्न सक्ने पहिला गर । हो, गर्न सकिने स–साना तर देशका लागि अति नै महत्वपूर्ण पक्षहरुका बारेमा पनि चिन्तन गर्ने की ? आउनुस धेरै ठूला र महत्वाकांक्षी भन्दा व्यवहारिक र तत्काल गर्न सकिने अनि विश्वभर तुरुन्त सकारात्मक सन्देश दिने साथै देशको आर्थिक ढुकुटीमा डलर आउने यस्तै केही विषयबारे चर्चा गरौं ।
साढे दुई वर्ष अघि म सिक्किम पुगेको थिएँ । त्यसबेला सिकिम्मका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङ्गसँग पनि प्रत्यक्ष रुपमा कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । त्यसबेला उहाँसँग उहाँको नेतृत्वमा सिक्किमलाई अर्गानिक स्टेट बनाएको बारे मैले जिज्ञाशा समेत राखेको थिए । उहाँले त्यसबाट फाइदा हुने पक्षहरु र भइरहेको प्रगतिबारे आफनो धारणा राख्नुभएको थियो । त्यस छलफलपछि आफनो देश नेपाललाई नै विषादीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरि विश्वमा अर्गानिक देशका रुपमा परिचित बनाउन पाए कति राम्रो हुने थियो होला ? भन्ने मनमा विचार आएको थियो ।
पक्कै पनि सानो भौगोलिक क्षेत्रफलभित्र पनि प्राप्त विविधताका बीच नेपाललाई अर्गानिक देश बनाउन सके, विषादीबाट वाक्क भएका विश्वका जनतालाई नेपाल आउँ आउँ बनाउन सकिन्छ । विषादीरहीत खानेकुरा र नेपालको मिठो पानी अति ताजा हावामा बसेर विश्वको कोलाहलपूर्ण जीवनबाट थाकेकाहरु फ्रेस हुन सक्छन् । त्यसबाट नेपालले अर्गानिक सामानको उचित मुल्य उनीहरुबाट प्राप्त गर्न पनि सक्छ । तर, नेपाल साच्चैको विषादीमुक्त भई अर्गानिक भएको र उत्पादित सामान अर्गानिक नै भएको भने निश्चित हुन आवश्यक छ । विषादी प्रयोग गरेर गरिने कृषि उत्पादनले दिने आम्दानी भन्दा मध्य र दीर्घकालमा अर्गानिक उत्पादनको आम्दानी निश्चित बढि हुन्छ । अझ विषादीको प्रयोगबाट उत्पादित सामानको प्रयोगबाट उत्पन्न भएको विभिन्न साईड इफेक्टबाट त्रसित मानिसहरु माझ अर्गानिक नेपाली उत्पादन पुर्याउन सके देशले भोगिरहेको बढ्दो व्यापार घाटा तुरुन्त कम गर्न सकिन्छ ।
बजारमा सहज उपलब्ध सस्ता प्लाष्टिकको अनियन्त्रित प्रयोगले नेपालमा चरम प्रदुषण बढाएको छ । यत्रतत्र उड्ने प्लाष्टिकले देशको माटोको उत्पादकत्व मात्र घटाएको छैन यसले चौतर्फी प्रदुषण निम्त्याएको छ । शहरका सडक र गल्लि गल्लिमा जताततै प्लाष्टिक नै प्लाष्टिक देखिन्छ । अझ आज भोलि गाउँगाउँसम्म यसको फैलावटले सर्वसाधारणको जीवनलाई अति नै प्रभावित पार्न थालेको छ । गाउँघरमा पालिने गाईवस्तुले प्लाष्टिक खाईदिँदा तीनको मृत्युसम्म हुन पुग्दा गरिव किसानलाई थेग्नै नसक्ने आर्थिक बोझसमेत थपिने गरेको छ । त्यसैगरी, माटोमा मिस्सिएको प्लाष्टिककले माटोको उर्वराशक्ति क्षिण गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल प्लाष्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक छ ।
प्लाष्टिक झोलाको सट्टा जुट, कपडा, ऊनी आदीले बनेका झोलाको प्रयोगमा सर्वसाधारणलाई अघि बढाउनुपर्छ । बढिमा १५ वर्षअघिसम्म नेपालीले प्लाष्टिकको झोला प्रयोग नै गर्दैनथे । गरे पनि अति कम मात्रामा मात्र । तर, पछिल्लो पाँच वर्षयता प्लाष्टिकको प्रयोग यसरी बढ्यो कि, यो विना जीवन नै चल्दैन कि ? भन्नेसम्मको सोच आममानिसमा पलाउन थालिसकेको छ । यस्तो सन्दर्भमा विश्वका अरु देशलाई पनि टाउको दुखाइको विषय भएको र कतिपय देशले यसको प्रयोगमा रोक लगाएको सन्दर्भमा हिमाल नै हिमालले भरिएको देश नेपालले प्लाष्टिकको प्रयोगमा रोक लगाउन एक दिन पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।
आउँदो पुस्ताको जीवन रक्षाका लागि पनि देशलाई प्लाष्टिकमुक्त देशका रुपमा विश्वमा उभ्याउन ठूलो छाती र दह्रो खुट्टा टेकेर यसबारे निर्णय लिन आवश्यक छ । केही सीमित व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको नाऊमा सबैलाई र अनन्त कालसम्म प्रकृतिमाथि अत्याधिक नकारात्मक असर पार्ने प्लाष्टिकको प्रयोगबारे गम्भीर चिन्तन गरिहाल्नुपर्ने र निर्णय लिइहाल्नु पर्ने समय आइसकेको छ ।
आध्यात्मिक शान्ति केन्द्र
विश्व र मानिस दुवैलाई केवल भौतिक विकासले मात्र शान्ति र सन्तोष प्रदान गर्न सक्दैन । भौतिक विकास र आध्यात्मिक अभ्यास दुवै एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन । एउटा मात्र पाङ्ग्रालाई मात्र बढि प्राथमिकता र अर्काेलाई उपेक्षा गर्दा सन्तुलित समाज र देश निर्माण गर्न सकिँदैन । तसर्थ, नेपालले संसारलाई नै देखाउने गरेर ठूलाठूला भौतिक संरचनाको प्रादुर्भाव र निर्माण गर्नसक्ने अवश्य होइन । यस्तो सन्दर्भमा सकभर प्राकृतिक उपायबाट मिल्दा संरचनाको निर्माण गरि आध्यात्मिक पक्षलाई प्रवद्र्धनमा नेपालले जोड दिन आवश्यक छ ।
नेपाललाई विश्वको शान्ति क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । वैदिक संस्कृतिको उच्चतम् प्रयोगबाट भौतिक विश्वबाट वाक्क भएकाहरुलाई शान्तिको ऊर्जा दिने स्रोतका रुपमा नेपाललाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा, भगवान पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड, खप्तड लगायतका क्षेत्रलाई वृहत्तर गुरुयोजनामार्फत धार्मिक आध्यात्मिक मर्मअनुसार विकास गरि त्यसको उचित प्रयोग गर्नुपर्दछ । यी स्थानहरुमा व्यक्तिले शान्तिपूर्वक महिनौ बिताउन पाउने प्रावधान मिलाउनुपर्छ ।
हो, नेपालका सबै डाँडाहरु, जंगलहरु योग ध्यान केन्द्र हुन । खाली आवश्यक छ यसबारेको सोच र प्रवद्र्धन । विभिन्न रोगका कारण जीवनमा दुःख पाइरहेकाहरु मात्र होइन, स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि नेपाल आएर दीर्घायुका लागि योग गर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ । विश्वभरबाट एक्लो मात्र होइन परिवारसहित नै योग गर्न आउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसरी योगका लागि आउनेहरुका लागि नेपालमा नै उत्पादित सात्विक भोजनमार्फत किसानसम्म उनीहरुको उत्पादनको मूल्य पुर्याउन सकिन्छ ।
नेपालको अहिलेको पर्यटन कामचलाउ प्रकारको छ । देशको प्रकृतिअनुसार पर्यटन क्षेत्रको विकास आवश्यक छ । थाईल्याण्ड, सिंगापुर, हंङकङ घुम्न जाने सोच राख्ने पर्यटक नेपाल आउने कोटिमा पर्दैनन । नेपाल आउने पर्यटक नितान्त प्राकृतिक घुमाइको अपेक्षासहित आएका हुन्छन् । त्यसकारण, उनीहरुलाई सुहाउँदो र दीगो विकासका लागि पर्यापर्यटनको सोच नेपालले लिन आवश्यक छ । विश्वभरका पर्यटक नेपालमा प्राकृतिक प्रकृतिको घुमाईका लागि आउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।
ज्योति विकासको कतिमा भयो मूल्य समायोजन ? राप्तिभेरीका लगानीकर्तालाई केही मार